WAYYAANEE: Ani Aangoo Dhabuurra Ummanni Oromiyaa Haa Dhabaman! Onkololeessa 31, 2016 Abbaa Urjii tiin: – Beekan Guluma Erena
WAYYAANEE: Ani Aangoo Dhabuurra Ummanni Oromiyaa Haa Dhabaman! Onkololeessa 31, 2016 Abbaa Urjii tiin:	Beekan Erena
Poems, Politics Category December 11, 2016OROMO
105SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
WAYYAANEE: Ani Aangoo Dhabuurra Ummanni Oromiyaa Haa Dhabaman! Onkololeessa 31, 2016 Abbaa Urjii tiin: Suuraa barruu tanatti haqaaramte daawwadhee quufuun dadhabe. Yaroon laalu mara imimmaan tu ija na guuta. Imimman kuniis kan gammachuu fii gaddaan walitti makame. Burqaan gammachuu tiyyaa fedhii fii murannoo ummanni Oromiyaa bilisummaa isaanii tiif horan suuricharraa hubachuu dha. Iddoo basaasotaan dhunfatamte, tan waraanaan marfamtetti, dhiibbaa sodachisuuf irratti godhamte hunda injifatanii, haala mul’atu kanaan harka qullaa, fuullee du’aa dura dhaabbatanii, “bilisummaa barbaanna!” jachuun onnee onnee olii qabaachuu dha. Tana arkuu tu imimmaan gammachuu ija keeysaa na yaasa. Ija imimmaan gammachuu yaaftu tana keeysaan Sheekh Maammad Nuuroo Bayaan tu natti mul’ata. Sheekhni walakkaa bara 1977-a, qabsoo bilisummaa Oromoo gargaarta ja’amee, qabamee, ganda isaa, Ija Bunaa, kan Aanaa Baddannoo naannoo Tortora Qallaa jirurraa fuudhamee, magaalaa Moojoo ol iddoo Funyaan Muxii ja’amtu geeyfame. Achitti, ajjeechaa isaa akka daawwataniif ummata walitti qabaniif dhaamsa sheenaa akka dabarfatu namichi isa ajjeesuuf deemu, bakka bu’aan Hizb-dirijjitii Dargii, Radi’eet, gaafate. Sheekhni carraa arkate tanatti dhimma bahuun ummata naannoo sanii, kan, “Sheekh Nuuroo Waliyyii, daqqabaa takkattii Maashoo Rassuulli deemmatuun harkattii,” je’ee isa faarsu dura dhaabbatee, “Yaa ummatoo! Ka’aa! Onnadhaa! Du’a sodaa nama akka keessanii-tiif hin gabroominaa. Namni du’a sodaatu Rabbi hin sodaatu. Namni mirga lammii fii maatii isaa tiif odoo loluu du’u shahiida (wareegama). Abbaa Jannataa ti. Kan lammii fii maatii isatti odoo diinni roorrisuu calisu, ammoo, booddeen isaa Azaaba.” Je’ee, faallaa fedhii Radi’eet haasawuun, sodaa malee, qoma isaa qawweef kenne. Sheekni wareegama isaa tiif nama xiqqollee sheenawee miti. Gama isaa tiin nama waan ummataan je’e hujirra oolchaa bahe. Darasoota dhibbootaan lakkaawaman kanneen Fiq’hii fii Tafsiira (seera amantii Islaamaa fii hiikkaa Qur’aanaa) barachuuf bira dhufan nama dammaysaa ture. San biraan, gaafa Xaaliyaan mootummaa Habashaa fonqolchee biyya teenya qabate, “Xaaliyaaniin dhufee, Jaanooy siree gadhiisee Akkanaaf hin taa’u, Nafxanyaan muuxa baasee” jachuun, Nafxaynoonni Xaaliyaaniin lollaa ja’anii duubbee Gaara Mul’ataa keeysa daddeemaa, roorroo ummata keenyarraan gayaa turan seenaaf galmeeyse. Gaafa Ingiliz Xaaliyaan biyyaa baasee Hayle Sillaasee baqarraa fidees, “Ingiliziin dhufee, Mosoloonii buqqaasee Osoo sabni jiruu, Haylee siree-rratti deebise,” jachuun mootummaa Ingiliz tan bulchiinsa gabrummaa Habashaa aangorratti deebifte nama balaaleeyfate. Sheekni, dura dhaabbii sirna gabrumaa tan haala kanaan ibsaa ture malees, akkuma shakkametti, gaafa Jaarraa Abbaa Gadaa qawwee takkaan naannoo isaanii dhufe, rashii lamaa fii Dubaay shaniin nama badhaase. San biratti, qabsoo bilisummaa qacalee qabeenya, yaada, ogummaa fii ilmaan isaa tiin hidda naqachiise. Kanaa fiin ija imimmaan guutteen kaa’immna kana keeysaan Sheekha mil’adha. Haalli imimmaan gaddaa tiin ija na guutu, yaaddoo haala kaa’imman kuni yaroo ammaatti keeysa jirani. Warra suuraarraa akka gaaritti mul’atan keeysaa, laata kanneen guyyaa san wareegaman jiruu? Gurbaan fuula-duraa, kan wayaa aadaa uffate; shamarreen hundarraa ol hiixattee, sanacha dumuceeysitee, tan haala qalbii nama fuudhuun onnattee onnachiiftu hoo numa jirtii? Yo gaaga’ama gaafasii keeysaa lubbuun baate, arra hoo haala akkam keeysa jirti? Laata mana hidhaa jiraatinnaa? Je’een if gaafadha. Garuu, gurbaa fii shamarree, akkasumatti ammalee, warra dura dhaabbatan, kanneen walakkaa fii booda jaajjan, warra suuraarratti mul’atanii fii hin mul’anne, kaa’imman miliyoona lamaa ol, kanneen sab-boonummaan achitti walitti fidde, fuula tokkoo isaanii irraa xiqqollee sodaan mul’achaa hin jiru. Wanni irraa mul’atu murannoo bilisummaaf qabanii fii qophii isiif wareegamuu ti. Kana hubachuun, duuba, gadda kiyya gammachutti deebisa. Yaroo tana, isaan keeysaan qabsaawota akka Magarsaa Roobaa (Abdii Habiib), Dachaas Galmoo, Guulaa (Jamaal Muussaa) fii qabsaawonni waliin turan natti mul’atan. Magarsaa fii Dachaas ji’a Abraashaa (Muddee) tan bara 1976-a keeysa, toora barcaa, odoo Aanaa Oborraa naannoo Laga Gabaa keeysa qaxxaamuranuu Tiiysitee toora sanii tiin walitti dhufan. Qabsaawonni, jara agarraan dafanii achii fagaachuuf raaree keeysa faana fuudhan. Tiiysitoonni ammoo, qabsaawota hidhannoon deeman agarraan hiikachiisuuf, dirmachuu lallabaachaa, faana sossoohan. Yaroo tana, Qotee Buloonni iyya dirmachuu dhagayan, lallabbii bowwaasaa, ooyrota hunda keeysaa gama qabsaawotaa yaa’anii, duraa fii duubaan marsan. Magarsaa fii Dachaas haala warra sardaa jaru jalaa bahuu hin dandeenyerra gayuu hubannaan, warra mancaa fii uleen hidhannoo hiikkachiisuuf itti deeman qawwee qabaniin ifirraa ittisuu fii arihuu osoo dandayanuu, “warra bilisummaa isaanii tiif manaa baane hin galaafannu” ja’anii boombii ifitti dhoosuun if wareegan. Odoo olee hin bulin, ummanni naannoo sanii, haala qabsaawonni mudatan irraa haalaan gaddan. Gadda isaanitti dhagayame, kaayoo qabsaawonni manaa bahaniif hordofuun irbuu seenan. Akkasiin, gaafasirraa kaasee, qabsoon bilisummaa tii fii naannoon san walitti firooman. Akkasumatti ammallee, dhuma bara 1977-a, magaalaa Watarii ol iddoo Gola ja’amututti, gaaga’ama fakkaataa tu qabsaawota biraarra gaye. Gaafana, meeshaa waraanaa Dirree Qabsoo tan Maayaa Qalloo irraa gama Raammis dabarsuuf, qabsaawota imaltuurra jiran tu Tiiysitee waldaya naannoo sanii tiin walitti bahe. Qabsaawonni hidhannoo jara ittiin injifatan odoo ifirraa qabanuu, amrii warra qawwee Chikooziin isaan doorsisaniif oggolanii, amanarraa dhaabbatan. San booda, eenyummaa fii haala isaanii keeysa ibsaniifii hayyama imatuu isaaniitti deebi’uu gaafatan. Tiiysitoonni gandaa garuu, yaada qabsaawotaa fudhachuu didan. Warri muuxannoo lolaa hin qabne, kanneen qawwee shan nyaattu hidhatan, qabsaawota kilaashinkoov, baazuuqaa fii boombii adda-addaa tiin deemmataniin, “hiikkachuu qabdan,” ja’an. Qabsaawonni ifii du’uu fii jara ajjeesuu keessaa tokko filachuu dirqaman. Tan lubbuu isaanii baayyee hin yaachifne. Kan isaan rakke, miya hidhannoo kan deemaniini. Miya wareegama qaaliin argame waan taheef irraa obsuu dadhaban. Isaanii yaaddoo tanaan rakkachaa jiru, Tiiysitoonni dhukaasa itti banan. Yaroo tana, Guulaa (Jamaal Muussaa), Aammad Yuuyyee, Maammad Aammad, Caalaa Aammad, Muummee Umar, Maammad Jibroo fii Eliyaas Wayyaal, ummata keenyatti qaataa hin harkifnuu murteeffatanii, harka isaanii tiin if galaafatan. Seenaan haala kanaa dheertuu taatullee, gabaabinatti, murtiin qabsaawonni fudhatan akkuma tan Magarsaa faatti seena-qabeeysa taate. Odoo hedduu hin turin, Tiiysitoota qabsaawotatti dhukaasa banan keeysaa baayyeen isaanii, kaayoo isaan manaa bahaniif if dura oofuuf murteeyfatanii gama Dirree Qabsoo yaa’an. Miyni qabsaawonni rakkatanii fiis, haa dhibaawu malee, Dargii jalaa dhooyfamee, akka jirutti, iddoo karoorfameef geeyfame. Duuba, daawwiin suuraa, yaroo garii, kaa’immaniin arku mara Magarsaa, Dachaas, Guulaa fii Jaallan waliin turan natti fakkeeysee imimmaan gammachuu tiin na hudha. Ummata, haala armaa olii kanatti, miliyoonaan bahee sirna gabrummaa jalatti hin bullu ja’u kana, Wayyaaneen, humna waraanaa tiin if jalatti bulchuuf tattaafachaa jirti. Wanti hawaasa biyya sanii keessatti jibirii; tan lafa Oromiyaa keeysatti baayyinni qubaan lakkaawamu; “Ani Aangoo Dhabuurra Ummanni Oromiyaa Haa Dhabaman!” murteeyfattee jirti. Haala kanaa fiis, ummata Oromiyaa ijaa-gurra adunyaarraa uggurtee, kumaatamaan ajjeesaa, madeeysaa, mana hidhaa keessatti araraasaa jirti. Ummata akka suuraarraa arkamutti bilisummaaf muratan, irree waraanaa tiin if jalatti bulchuuf ijibbaata godhuun taqayyurummaa daangaa hin qabne. Ummata akkanatti mirga isaa tiif anaannatan, waraana isii kan akkaa-gara hin qabnee mitii, kan adunyaa maraa tiin galii isaanii irraa hanqisuun hin dandayamu. Kana beekuu dhabuun Wayyaanee, seenaa adunyaarraa odoo hin taane kanuma Dargii irraa huu wahuu baruu dhaba isii agarsiisa. Irree waraanaa tiin Faransaayiin – qabsaawota Algeeriyaa; Israa’el – sab-boonota Falasxiin; Ameerikaan – murattoota Afgaanistaan jilbiiffachiisuu hin dandeenye. Haaluma kanaa waliin, wanni Wayyaaneen hubachuu dadhabde, bara 25-if aangorra turuu kan dandeeyse, qaruutummaa fii jabina waraana isii tiin odoo hin taane, humna isii dura dhaabbatu qabaachuu dhaba qofarraa tahuu dha. Ee! Kan dhagayuu tu hanqate malee, Wayyaaneen, gaafa angoorratti baaterraa jalqabee, tolaan akka irraa hin buune himuurraa takka if hin qusanne. Haala kanaa fiis, Tigroota generaalummaa muudachaa, raayyaa leenjifachaa, miya waraanaa kuusachaa baate. San birattiis, ummatoota ibiddaa fii citaa walitti godhaa, caasaa basaasummaa tii fii tokko-shanee tiin hawaasa tooyachaa turte. Duuba, odoo isiin haala saniin barcuma aangoo tottolfattuu, ummanni Oromiyaa bahaadhihaan, kaabaa-kibbaan xiqqaa fii guddaan itti fincilanii, yaroo gabaabduu keeysatti, hafuura itti kutan. Anaannataa fii muraannoon akka suuraarraa mul’atuu, irree qabsoo hidhannootti geeddaramee as bahuuf yaroo irraa hin fudhatu. Kaa’imman harka qullaa waraana diinaa dura dhaabbachuuf onnee horan, yo hidhatan, waraana Wayyaanee kan kan Dargii daran hamileen buute akkam akka godhan tilmaanuun nama hin dhibu. Garuu, akka haalli kuni hin taanee, diina, ambaa fii lammii keeysaa hiis warri barbaadan heddu. Diina malees amba keeysa warri kana fedhan jiraachuun nama hin dinqu. Ajaa’ibni guddaan, diina lolaan malee Oromiyaa keessaa hin bahu ja’u, kan kanaa fiis xiqqaa fii guddaa halkanii-guyyaa ajjeesaa jiru, qabsoo hidhannoo tiin dura dhaabbachuun biyyattii akka Suuriyaa fii Soomaaliyaa godha jachuun, kanneen qabsoo hidhannoorraa lammii hamilee cabsuu barbaadan, arrallee, mooraa qabsoo keeysa jiraachuu dha. Yaanni arra bifa armaa olii tiin dhihaate, ammaan duraas, haala adda-addaa tiin hujiirra oolee jira. Bara 1991 dura, kumaatamni qabsoo bilisummaa tiif hidhatan yaada manaa bahaniif akka hujiirra hin oolchine godhaman. San bira kutee, bara 1992 keeysa, akka beeyladaatti diinaaf goorannootti naqaman. San boodaas, maqaa Jilaa tiin biyya Noorway magaalaa Bergenitti “Exploring New Political Alternatives for the Oromo in Ethiopia” (Oromoota Xoophiyaa tiif Kaayoo Siyaasaa Tan Qabaniin Addaa Soquu) bu’ura ja’uun, teeysumti faallaa qabsoo bilisummaa gaggeeyfamte. Maqaa Jila kanaa tiin, summii mooraa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti cunfamuuf yaalamte dooyaa internet, https://www.cmi.no/publications/file/3360- exploring-new-political-alternatives-for-the-oromo.pdf irraa hubachuun ni dandyama. Ammallee, dhiheenyuma kana, odoo fincilli amma kokkee diinaa hudhe kuni odoo hawaasa keessatti bilchaachaa jiru, diinatti harka hiixachuun imalli karaa biyyaa taasifame, kan if-tuulummaa Wayyaanee tiin fashale, ijibbaatuma qabsoo hidhannoo bilisummaa ummata Oromiyaa laamsheysuuf godhame. Duuba, arra, qabsoon bilisummaa ummata Oromiyaa shiroota armaa olitti ibsamanii fii kanneen biroo tiis injifattee, sadarkaa if duuba hin deebine geeysee jirti. Akka olitti ibsametti, barbaachisaan murannoo kaa’imman Oromiyaa keessaa danfaa jiru gama qabsoo hidhannoo Riphee Loltummaatti jijjiiruu qofa. Qabsoon bifa saniin qindooyte; tan seenaa armaa olii irraa baruun dogoggora fakkataarraa if hanqiftu; tan qabsaawota biyya keessaa tiin hoogganamtu, Wayyaanee jilbiiffachiiftee, hawwii Sheekh Maammad Nuuroo, Magarsaa, Dachaas, Guulaa, jaallan waliin turanii fii wareegamoota akka isaanii hujiirra oolchuuf yaroo irraa hin fuudhatu. Oromiyaan ni bilisoomti! abbaaurjii@gmail.com
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa105SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← QOPHII NETWORK OF OROMO STUDIES’f IBSA KENNAME-Konfiraansii Qorannoo Dhimma Oromoo Biyya Awurooppaatti ta’uuf jiru kana dhagegeffadha!!
Atimee yaa: Walaloo kana dubbisa! →